निलो यती पत्ता लगाउँदै | Martech Zone
निलो यती पत्ता लगाउँदै
सोमबार, नोभेम्बर 22, 2010 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
यो Martech Zone रेडियो शो धेरै श्रोताहरु (१,1,500०० भन्दा बढी!) ड्राईभ गर्दैछ र प्रत्येक हप्ता बढी लोकप्रिय हुँदै जान्छ। लोकप्रियता संग आलोचना पनि आउँछ ... र डेव वुडसन, अनुभवी पोडकास्टरले हाम्रो पोडकास्ट गुणस्तरको बारेमा हामीलाई (राम्रोसँग योग्य) कठिन समय दियो। हामी एउटा प्रयोग गर्दै थियौं निलो स्नोफ्लेक युएसबी माइक्रोफोन हाम्रो अफिसमा - जुन ध्वनिकीमा सबै मानार्थ होईन।
यसको नतिजा भनेको माइक्रोफोनले टेबुलमा कुनै पनि ट्यापहरू उठायो, हाम्रो फ्रिजको किता, र टिन क्यानी गुणस्तर। शोषक सामग्रीको साथ एक शान्त कोठामा, त्यो माइक्रोफोनले राम्रो गर्छ। विशेष गरी यो पोर्टेबल भएकोले र तपाईको झोलामा स्लाइड गर्न सक्दछ। यात्रा को एक बर्ष पछि, मेरो स्क्रीन पप अफ भयो र पछाडि संलग्न गर्न केहि Adhesive आवश्यक छ। नयाँ माइक्रोफोनको लागि समय!
डेवले ब्लूको सिफारिस गर्‍यो यती यूएसबी माइक्रोफोन त्यसैले हामीले यसलाई अर्डरमा तुरुन्तै राख्यौं किनकि यो सस्तो थियो ...… १०० भन्दा बढी। यो हाम्रो भर्खरको रेडियो कार्यक्रम छलफल अघि छलफल भएको थियो फेसबुकको नयाँ ईमेल सुविधा केहि उद्योग पेशेवरहरु संग।
वाह, एक राक्षस! माइक्रोफोनले शानदार काम गर्‍यो र शोको गुणस्तर थोरै सुधार भएको छ। मलाई अझै पक्का विश्वास छ कि हामीले मेटल डेस्क र इको चेम्बरसँग केही चुनौतीहरू पाएका छौं जुन हामीले कार्यक्रममा राख्दै छौं ... तर हामी यसलाई समय बित्दै सुधार गर्न जारी राख्नेछौं। सिफारिसको लागि डेभलाई धेरै धेरै धन्यवाद।
माइक्रोफोनसँग तपाईका दर्शकहरूको आधारमा अपरेसनको। मोडहरू छन्। यससँग बहु सेटिंग्स छन्, तपाईंले लिने प्रयास गर्नु भएको ध्वनिको स्थानमा निर्भर गर्दै - स्टेरियो, कार्डियड, सर्वव्यापी, र द्विदिशात्मक। यहाँ को एक विवरण छ यती सेटिंग्स र निलो साइटबाट अनुप्रयोगहरू:
हामी ध्वनिकी सुधार गर्न अफिसमा कार्य जारी राख्नेछौं, तर मलाई श I्का छैन कि हामीले सही पोडकास्टि mic माइक्रोफोन भेट्टायौं। यो एक उत्तम मूल्यमा हार्डवेयरको एक उत्कृष्ट अंश हो!
टैग: मार्केटिंग पोडकास्टमाइक्रोफोन
वायरफ्रेम विकास उपकरणहरू अन्तर्क्रियात्मक हुन्छन्
कर्पोरेट ब्लगिंग: र्‍याप गीत